Lelee akpa gị: Tom Cruise na -agba ara maka akpa akwa ezuru
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Lelee akpa gị: Tom Cruise na -agba ara maka akpa akwa ezuru
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Tourism • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Tom Cruise na -ewe iwe
Ị ga -eche dị ka otu n'ime kpakpando Hollywood kachasị ewu ewu n'ụwa, ị ga -anọ n'otu egwuregwu, mana o doro anya na ọ bụghị.
Onye na -eme ihe nkiri US Tom Cruise na -agbapụ ihe nkiri Mission Impossible 7 na United Kingdom. Chee na nnukwu onye egwu dị ka ya agaghị enwe nchegbu maka ihe ezuru ezu ọkachasị ndị nche na -echebe ndụ, aka na ihe?
Chee echiche ọzọ, n'ihi na nwa nwoke Tommy nwetara ngwongwo ya niile gụnyere ihe ndị ohi zuru nke ka nọ n'ime ụgbọ ala mgbe ọ bịarutere UK.
Ee e, ọ bụghị naanị na ezuru ngwongwo, ebuurula ụgbọala BMW X7 n'onwe ya.
N'agbanyeghi na ụgbọ ala nọ na -eji ngwa nsuso, ihe niile dị n'ime ụgbọ ala ahụ apụla.
Cruise na onye na -eme ihe nkiri Hayley Atwell gbara ihe nkiri ahụ. Ọ nọ na Grand Hotel dị n'obodo Birmingham ka ọ na -ese ihe nkiri na nnukwu ụlọ ahịa Grand Central dị nso mgbe izu ohi ahụ mere.
BMW X7 dọwara na họtel ahụ mgbe izu ohi mere. Akpọwo ohi ahụ dị ka “teknụzụ dị elu” site na iji usoro 4 nke na-enye ohere ka emepe ụgbọ ala na-enweghị isi site na iji nnyefe na-emegharị mgbama fob.
A kọwo na ndị na -apụnara mmadụ ihe ejirila puku kwuru puku pound gbalaga na -elekọta ndị nche Cruise. Ikekwe, a ga -enye onye nche ahụ ka ọ na -eche naanị "ahụ," kamakwa ihe dị n'ụgbọ ya.
Ihe merenụ mere na Birmingham na agbanyeghị na ndị uwe ojii mere ngwa ngwa chọta ma chọta ụgbọ ala ahụ site na iji ngwaọrụ elektrọnik nke akpaaka kwadebere, mgbe achọtara ya, ọ nweghị ihe fọdụrụ n'ime ụgbọ ahụ.
Ndị uwe ojii kwuru na ha nwetara akụkọ nke BMW X7 (ọnụ ahịa ya bụ 100,000 pound) zuru n'ụlọ ụka Church, Birmingham, n'isi ụtụtụ Tuesday. Enwetara ụgbọ ala ahụ obere oge ka e mesịrị na Smethwick. Ajụla CCTV maka mpaghara a chọtara ụgbọ ala ahụ ka nyocha na -aga n'ihu.
Tom bụ otu n'ime ndị na-eme ihe nkiri kacha akwụ ụgwọ na Hollywood nwere ọnụ ahịa ruru nde $ 600 na-enweta ihe ruru $ 50 nde kwa afọ. Ruo ego ole ọ na -eme n'otu fim, dịka ọmụmaatụ, Cruise nwetara nde US $ 75 site na nke anọ Mission: Ihe nkiri agaghị ekwe omume, Protocol Ghost. A maara ya maka ịme ihe nke aka ya na ịnye ọtụtụ ihe nrite mmeri. A maara ya nke ọma maka ihe nkiri dị ka usoro Mission Mission, Top Gun, Minority Report na Vanilla Sky.
Dị ka akụkọ si kwuo, iwe na -ewe Tom Cruise maka ohi.
September 1, 2021 na 06: 18
Haziri na ha mere atụmatụ nke ọma. Chọrọ ha karma ọjọọ na ha ga -enweta ya.